Author: Zololar Musida
Sirni manguddootaan qaceelu amaluma hawaasa doofaa taheellee kan Oromoon dhaabbate jabaa tahuun seena, hangafaafi quxxusuun qaceeluu isaati. Maqaan Goggeessota Gadaa bakka garagaraatti: Hamalmaal moohamuun Faxagariin guutumatti harka Oromootti deebise.
Kanatti dabalee waan dhimma biyyaa ilaalan yeroo kanaa kaasee qorachuu dandaya. Gochuma gara-jabummaa kana fakkaatuun lubbuunsaa kan badde, hayyuu, qaroofi gootichi Hayila Maaram Gammadaas waan nutti dhaame qaba. Egaa yaa dargaggoota Oromoo, jechi A.
Jechuudhaan warra lubbuun hafanitti dhaammate. Sirna Gadaan duratti akkaataa bultuma Oromoo akkam akka ture wanti beekamu hinjiru. Birmajiin Wallo Bagamidir seenanii Amaaroota hedduu fixan. Namoota biraa wajji jiraata, hojjataas.
Ormoon waan tikfattee tureef qabeenya dhuunfaa loon yoo tahe malee, lafti qabeenya gamtaa ture. Akkuma hawaasni sun dagaaguun hangafaafi quxxusuun ibidda, manaafi gosa keessattiis hojiirra oola.
Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba. Orlmoo Amaaraatti dawwee jechun, dhukkuba lamxii jechuudha Muudana: Tuulama keessatti — Dabballee jedhamu. Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Inniniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa tahuun nimala. Lolli sun guyyaa kudhalama deeme.
Arsii keessatti- Miseensa jedhama. Kun hundi dinagdeefi polotikaa sirna hawaasaarratti hundeeyfamau; kanneenirraa calaqqisa argamaniidha. Kuniis, waggaa Gadaa wajjiin walitti hidhataadha.
Gaammoonni sadarkaa Gadaa yeroo itti ijoolleen jabbiilee tiksan, hojii warraarratti gargaaraniifi loon tiksaniidha. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe.
Jireenyi dhala namaa walitti hidhaataadha. Boorna keessatti — Kuusa jedhama. Kanneeniis addaan kan baafataman: Akka bara saniitti eenyulleen aadaa kana nifudhata. Lolli amantii yeroof akkasiit qabbanaawullee Oromoon lola isaa itti fufe. Tuulam keessatti Foollee jedhama. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa: Kanaaf Oromoon osoo sirna Gadaatiin as hin bahin, sirna qoodama karra cimdii kanaan walbulchaa ture jechuun nidandeenya.
Gadaan isaanii dhumee lamaanuu Birmajiif bakka gaddhiisan. Gujii keessatti — Raaba jedhama. Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Hatahuu malee, geggeessaan Islaama Harar Amiir Nuur jedhamu humna walitti qabatee bara tti Habashatti duulee ture.
Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aada diinagdeefi amantiiti. Goggeessi Gadaa shanan paartiilee shan kan ijoolleefii manguddoota hiriyyaa godhuus paartii tokkicha waliin qabaachuudha. Birmajiin Tuulamaafi Macaa lafa fardi isaa dhaquu dandayu mara deemee qabate. Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee lola ittifufe.
Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu. Hariiroon ku yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo keessatti hojjate. Harkisanis, gadi lakkisanis firiin isaa tokkuma.
Kiiloleen Gadaa isaa fixee Biifoleetti dabarse. Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi jireenya dhala Oromoo hundaatu keessatti murtaawa. Kanarraa akka ilaalcha polotikaa baraatti hubachuuf waan Paartii ilaaluun gaarii taha. Haa tahu malee Birmajiin gara dhuma Gadaa isaati jala Gojjaam keessatti moohame.
Luwis jedutti isaan kanatti aanee kan godaane Oromoodha.
Yeroon isaas osoo hin gahinnillee waan beekamuuf sadarkaa itti aanuuf isa qopheessaa ture. Seenaa qabsaayaa fi goota Oromoo Dr Diimaa Nagoo. Murtii polotikaarratti fuulaan yoo qooda hin fudhannellee, waan yaada ummataa of harkaa qabaniif qajeelchuufi karooraratti qooda guddaa kennu.
Sirna Gadaa keessatti hawaasni Oromoo gartuu lamatti qoodamee ijaarame. Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban ilmaan kormaa thuu seenwa.
Waan inni jedhe dhagayu. Guyyootii jiraniif maqaa 27tu jira. Ayyaana gurguddaafi beekamoorratti hiriyyaan wal argee waliin turuudhaan walfaarsa.